Horseed oo ku guulaysatay horyaalki 28-aad ee Kubadda Laliska+Sawirro
Friday October 30, 2015 - 00:32:39 in Xiriirka Kubadda Laliska by
Waxaa garoonka Wiish shalay galab Garoonka Wiish lagu soo gebagabeeyay horyaalki 28-aad ee kubadda laliska waxaana kulanki xeritaanka horyaalka musoo daawasho tagay masuuliyiin ka socota wasaaaradda dhalinyarda iyo isboortiga,Wasaaradda Hidaha iyo Ta
Waxaa garoonka Wiish shalay galab Garoonka Wiish lagu soo gebagabeeyay horyaalki 28-aad ee kubadda laliska waxaana kulanki xeritaanka horyaalka musoo daawasho tagay masuuliyiin ka socota wasaaaradda dhalinyarda iyo isboortiga,Wasaaradda Hidaha iyo Tacliinta, Guddiga Olombikada Soomaliyeedm Xiriirka kubadda Gacanta, Kolayga Laliska iyo Ciyaaraha Fudud.
Kulanki ugu dambeeyay Horyaalka waxaa fooda isku daray kooxaha Horseed iyo Wacaaf oo waxayna labada koox soo bandhigen ciyaar xiiso leh oo ay ka maqsudeen masuuliyiintii ka qayb gashay waxyna ciyaarta 3-0 guusha ku raacday kooxda Horseed oo sidaa ku hanatay horyaalka.
Kooxda Horseed ayaa sidaa ku difaacatay horyaalka Kubadda Laliska waxaana la guddoonsiiyay koobka kalinta koowaad ee horyaalka halka kooxda Wacaf ay koobka kalinta labad hanatay.
Dhammaan masuuliyiinti kaso qayb gashay aya ammaan ballaaran uso jeediyay xiriirka Kubadda laliska iyo kooxahiisa oo tartan wacan so bandhigay.
Guddoomiyaha Xiriirka kubada laliska Ingineer Maxamed Cabduqadir Abuukr oo gebagebadii ka hadlay ayaa u mahd celiyay kooxaha Kubadda lalaiska oo tartan wacan nsoo bandhigay iyo shirkaddahja Mdioobya Jubba Airways iyo Daalo Airlines oo xiriirka ka cawiyay qalabka kooxaha.
Guddoomiyaha ayaa inta ku daray in ay qaban doonaan ciyaaraha kubadda Laliska Xeebaha iyo tartanka kubbadda laliska iyo dugsiyada kadibna ay u diyar garoobi doonan tartanka degmooyinka kuwaas oo dhamman laf dhabar u ah horumarka kubadda Laliiskaaa.